WTTC: Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee Faransiiska ayaa qarka u saaran inay soo kabsato wax ka badan seddex meelood meel sanadkan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Faransiiska » WTTC: Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee Faransiiska ayaa qarka u saaran inay soo kabsato wax ka badan seddex meelood meel sanadkan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • saaciday inay • Wararka Faransiiska • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Parks Theme • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
WTTC: Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee Faransiiska ayaa qarka u saaran inay soo kabsato wax ka badan seddex meelood meel sanadkan.
WTTC waxay sheegtay in kobaca qaybta sanadkan uu qarka u saaran yahay inuu sare u kaco ka hor soo kabashada guud ee Yurub oo ah 23.9%, iyo soo kabashada caalamka oo ah 30.7%.
Faransiiska ayaa la filayaa inuu soo kabsado socdaalka iyo waaxda dalxiiska ka hor UK iyo Yurub.
Haddii tillaabooyin muhiim ah la raaco, Waaxda Socdaalka & Dalxiiska waxay arki kartaa tirooyinka shaqaalaysiinta oo ka sarreeya heerarkii faafitaanka kahor 2022.
Sannadka 2019, wax ku biirinta Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee Faransiiska ee GDP waxay u taagan tahay €211 bilyan (8.5% dhaqaalaha qaranka).
Daraasad cusub oo ka socota Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa shaaca ka qaaday soo kabashada waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee Faransiiska inay gaari karto kobac dhan 34.9% sanadkan.
Warku wuxuu imaanayaa maalinta WTTC, oo matalaysa waaxda socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah, xubnaheeda, iyo hogaamiyayaasha ganacsiga ee adduunka oo dhan, u socda Paris si uu uga qayb galo shirka Destination France.
Waxaa soo qabanqaabiyay madaxweyne Emmanuel Macron oo khudbad furitaan ah ka jeediyay WTTC Guddoomiyaha iyo madaxweynaha & maamulaha shirkadda Carnival Corporation & plc, Arnold W. Donald, munaasabadda ayaa diiradda saari doonta sidii dadka safarka ah loogu celin lahaa meeshii ay u socdeen oo ka hor masiibada, ahayd meesha ugu caansan adduunka.
WTTC ayaa sheegay in kobaca qaybta sanadkan uu qarka u saaran yahay inuu sare u kaco ka hor soo kabashada guud ee Yurub oo ah 23.9%, iyo soo kabashada caalamka oo dhan 30.7%.
In 2019, FranceTabarucaadka Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee GDP waxay ka dhigan tahay €211 bilyan (8.5% dhaqaalaha qaranka).
2020, markii masiibada keentay in socdaalkii caalamiga ahaa uu hakad ku yimaado, ka qayb qaadashada waaxda socdaalka iyo dalxiisku waxay hoos ugu dhacday kaliya €108 bilyan (4.7% dhaqaalaha qaranka).
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego cilmi-baaristii ugu dambeysay, heerka soo kabashada hadda, FranceWaaxda Socdaalka & Dalxiiska waxay filan kartaa kobac sanadba sanadka ka dambeeya 35%, taasoo ka dhigan koror dhan €38 bilyan.
Xogta ayaa sidoo kale daaha ka qaadaysa in waddanku uu arki karo kororka sanad kasta 21.8% sanadka 2022, taasoo gacan ka geysaneysa kobcinta dhaqaalaha 32 bilyan oo Yuuro.
Ururka dalxiiska adduunka ayaa sheegay in iyada oo kor u kaca safarrada gudaha ay siisay xoogaa nasasho ah qaranka, kuma filna in la gaaro soo kabashada buuxda ee loo baahan yahay si loo badbaadiyo dhaqaalaheeda iyo malaayiinta shaqo ee ku luntay masiibada COVID-19.